Uhlaziyo olutsha lwe-Anguilla kwiProtokholi yokuNgena kokuHamba ukuqala nge-1 kaNovemba
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » Uhlaziyo olutsha lwe-Anguilla kwiProtokholi yokuNgena kokuHamba ukuqala nge-1 kaNovemba
Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! • iindaba
HE iRhuluneli kunye noHloniphekileyo. INkulumbuso yase-Anguilla ichaze iimfuno ezihlaziyiweyo zokungena kwiindwendwe eziza kuqala ukusebenza ngoMvulo we-1 kaNovemba ka-2021.
Iimfuno zangaphambi kokufika:
• Zonke iindwendwe ezineminyaka eli-18 nangaphezulu kufuneka zigonywe ngokupheleleyo ukuze zivunyelwe ukungena e-Anguilla; abafazi abakhulelweyo bakhululwe kule mfuneko. Inkcazelo “yokugonywa ngokupheleleyo” ziiveki ezintathu (3) okanye iintsuku ezingamashumi amabini ananye (21) emva kwedosi yesibini yesitofu sokugonya. Amayeza okugonya axutyiweyo amkelwe kodwa kufuneka abe luhlobo oluthile lwePfizer, AstraZeneca kunye neModerna.
• Abahambi kufuneka bafake isicelo seMvume yokuNgena apha ivisitanguilla.com; isicelo sokungena siya kubandakanya intlawulo yovavanyo lokufika ye-US $ 50 ngomntu ngamnye.
• Uvavanyo lokuba awunayo i-Covid-19 kusaza kufuneka, kodwa uvavanyo ngoku kufuneka luthathwe kungekho ngaphantsi kweentsuku ezi-2-5 phambi kokuba lufike.
• Iindidi zovavanyo ezamkelekileyo zezi:
o Iimvavanyo zokuReverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).
o Iimvavanyo zeNucleic Acid Amplification (NAA).
o I-RNA okanye uvavanyo lwemolekyuli.
o Iimvavanyo ze-Antigen zigqitywe nge-swab ye-nasopharyngeal.
• Ilabhoratri eqhuba uvavanyo lwaphambi kokufika kufuneka ivunywe. Ukuzilawula ngokwakho kunye novavanyo lwe-antibody aluyi kwamkelwa.
• Zonke iindwendwe ziyavavanywa ekufikeni kwazo kwaye kuya kufuneka zihlale kwindawo yazo kwihotele yazo, kwilali enelayisensi okanye kwezinye iindawo zokuhlala ezirentwayo ngelixa uvavanyo luqhutywa (ngokuqhelekileyo kwiiyure ezingama-24).
• Ukuba ngaba iziphumo zovavanyo zithe awunayo, akusayi kubakho mfuneko yokuvalelwa. Iindwendwe zikhululekile ukuba zihlole isiqithi ngokwazo.
• Iindwendwe ezihlala esiqithini ngaphezulu kweentsuku ezisi-8 zinokuvavanywa ngoSuku lwesi-4 lotyelelo lwazo, ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo.
Izicelo aziyi kwamkelwa emva kwentsimbi ye-12:00 PM EST ngosuku olungaphambi komhla wokufika.
Iindwendwe ziyacelwa ukuba zibambelele kwaye zihloniphe imigaqo ye-COVID-19 yokusekwa esiqithini, equka ukugquma ubuso kwiindawo ezingaphakathi zikawonke-wonke; Ngalo lonke ixesha ugcina umgama ophakathi kweenyawo ezi-3 phakathi kwabantu abakwisetingi zangaphakathi; kunye nokujonga ucoceko olufanelekileyo ngokuhlamba izandla rhoqo okanye usebenzisa isicoci sezandla.
I-Anguilla's Health Authority ikhusele isitofu sokugonya i-Pfizer ukwandisa inkqubo yogonyo olusesiqithini ukuya:
• Bonke abaneminyaka eli-12 ukuya kweli-17 ubudala.
• Abo bangekagonywa.
• I-booster shots kwabo sele begonywe ngesitofu sokugonya i-Astra Zeneca (malunga nama-60% abantu abadala bengingqi).